Naya Post Nepal | बा घ सँग ३ मिनेटसम्म लडेर बाँ चेकी सा’ह’सी महिला,( हेर्नुहोस भिडियो)
बा घ सँग ३ मिनेटसम्म लडेर बाँ चेकी सा’ह’सी महिला,( हेर्नुहोस भिडियो)
मानिस बा””घ भन्ने बित्ति””कै डरा”” उने गर्दछन्। बा””घको छेउ””छाउ पर्न त के त्यसको आवाज साथै छाया समेत पर्न स किदैन। के तपाईं प’त्याउनु हुन्छ बा””घ लाईनै जित्”ने साह ””स महिला पनि छिन्?? हो यस्तै घट ना घटेको छ बाके जिल्लामा जहा बा””घसँग ३ मिनेटसम्म ल “”डेर बाँचे “” की छिन् एक महिला।
बा””घले एक्कासी ती महिला लाई आ””क्र मण गर्यो बा” ”घले उत्तानो पारेर घाँ”” टीमा आत्र मण गर्नै लाग्दा त्यो बाघलाई हातमा भएको खु र्पाले हि र्काइन्। त्यो गरेपछि बा”घ अलि परसर्यो ।
यो सबै काम गर्दा मैले कसरी गरे कसरी सक्ती आयो र बा””घ लाई परा “”त्त गरे केही थाह नभएको बताउँछिन्। पछिल्लो समय बाँकेमा बा”घ को आ””त्रमन् दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। बेलैमा संबंधित निकायको ध्यान जाओस्।
यो पनि ,,प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले नवनियुक्त तीन जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बिहीबार आयो जित एक समारोहबीच उनीहरुलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरि एको हो । गृह मन्त्रालयको मन्त्रीस्तर निर्णयाबाट प्रहरी
अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा पदोन्नति भएका बसन्तकुमार पन्त,
धिरज प्रताप सिंह र रबिन्द्र बहादुर धानुकलाई प्रहरी महा निरीक्षक क्षेत्रीले दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरेका हुन् । नेपाल प्रहरीका तीन डीआईजीलाई बिहीबार एआईजीको फुली लगाउन जति हतार भयो, त्यो भन्दा बढी भ्याइनभ्याइ ब ढुवा हुन नपाएका अरु तीन डीआईजीलाई थियो।
सरकारले बिहान मात्रै तीन डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। अरुबेला सरकारको निर्णय तीन दि नसम्म पनि प्रहरी प्रधान कार्यालय पुग्दैन। यिनै तीन एआई जीको दरबन्दी थपको निर्णय पुग्न पनि हप्तौँ लाग्यो। तर, य सपटक बिहान सरकारले निर्णय गर्यो।
तरखरमा लाग्दा पन्तकै ब्याचीहरु ईश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्याल र प्रकाशजंग कार्की त्यसविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च पु गेका थिए। एआईजी बढुवा भएका सिंह र धानुक उनीहरुभन्दा पछिल्लो ब्याचका हुन्। आफूहरुलाई नगरी कनिष्ठलाई एआई जी बनाउन लागिएको भन्दै उनीहरुले यसअघि सिफारिस विरुद्ध नै उनुरी गरेका थिए।
तर उनीहरुको उजुरी सुनुवाइ समितिले सुनेन। बढुवा सिफारिस अगाडि बढाउन सरकारलाई बाटो खोलिदिएपछि उनीहरु सर्वो च्च पुगेका हुन्। उनीहरुले बिहान कार्यालय खुल्नासाथ लोक सेवा आयोग पुगेर आफ्नो उजुरी उपर भएको कारबाहीबारे लि खित जानकारी लिए। त्यसपछि उनीहरु सर्वोच्च पुगेका थिए।
धेरै समय पछी आज केही लेख्दैछु । समय कत्तिको उपयूक्त हो थाहा छैन । हाम्रो परिवारका लागी व्यक्तिगत रुपमा यो बर्ष सु खद रहेन । हुन त देश, राज्य र ब्रम्हाण्डलाई नै सुखद नरहेको हाम्रा लागि मात्र कसरी अनुकुल हुन सक्थ्यो र ! कुरा अब व र्तमान को गरौ । सामाजिक संजालहरुमा मेरो उपस्थिती लामै समय देखि छ ।
आफ्ना निजी कुराहरु अनि समसामयिक बिषयमा हल्काफूल्का टिप्पणी, व्यंग आदीका माध्यमबाट । यसलाई म आफैले कहि ल्यै आफ्नो पेशासंग जोडने प्रयास गरिन । तर आज पहिलो प टक मैले व्यावशायिक पाटो उप्काउदै छु । सरकारी सेवामा का र्यरत मैले यसपटकको बढुवामा आफ्नो नाम नपर्दा गरेका
उजुरी बारे लगभग सबैजसो नाम चलेका पत्रपत्रिका र अनला इनहरुमा आए । समाचारमा आएका कतिपय कुराहरु तथ्यगत थिए भने कतिपय अनुमानित । तर सन्तोषको कुरा के रह्यो भने विना प्रभाव पनि सकारात्मक समाचार आउदा रहेछन भन्ने मेरो निजी धारणाको विकास भयो
यो कुनै व्यक्ति वा संस्था वा सरकार लक्षित बि’रोध पनि होईन, हुन सक्दैन । बरु यसक्रममा मलाई न्याय दिन प्रयास गर्ने स ह्रदयीहरु प्रति आभारी छु, त्यसैले यसमा गरिने अतिरंजनामा पनि मेरो बिमति छ । यस बिच मलाई गोटी बनाएर खेल्न खो ज्ने पात्रहरु पनि बग्रेल्ती भेटिए तर तिनका उत्तेजित गर्ने प्रया सहरुलाई सहज रुपमा अस्विकृत गरियो ।
तथापी यसलाई कसैले ग’लत रुपमा परिभाषित गर्छ र बु’झ्छ भने त्यसको जि’म्मेवारी मैले लिन सक्दिन । मेरो जि’किर के वल आफूले न्याय पाउनु पर्छ भन्ने मात्र हो । अनि यो उ’जुरी अहिले नै किन ? यसभन्दा अघि पनि त मौका थियो नि त ? भन्ने प्रश्नहरु पनि नते’र्सिएका हैनन ।
यसका लागि “रातो कार्ड” दिएर बाकि खेल हेर्न त के मैदान मै बस्न नदिने जस्ता “नियम र रेफ्री”को व्यवस्था गरिएको बारे “बैशाख १९” पछी बिवे’चना गरौंला । अहिलेलाई सेवाकालको उत्तरार्द्ध’मा गु’माउनु केही नरहेपछीको क’दम मात्र हो यो भन्ने मेरो बुझाई हो ।
मैले केही दिन अघि ट्विटरमा एउटा ओपिनियन पोल गरेको थि ए, “अन्तिम आशा त न्यायालय कै रह्यो, हेरौ ! जाम कि नजाम ?” थोरै फलोवरका बावजुद ८३% ले जानुपर्छ भनेकाले पनि मलाई नि’र्णय’मा पुग्न नैतिक बल पुग्यो । तर न्यायालय पुग्नु अघिको बि’धमान नियम र कार्यविधिको ज’टिलता’लाई पनि पार गर्नै पर्ने बाध्यता रहेछ ।
२०७८ चैत्र १८, शुक्रबार प्रकाशित 1 Minute 1204 Views